Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-bolan'ny Carrie Chapman Catt | Kamala Harris: Vehivavy mpiady politika mandritra ny androm-piainana roa - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Rehefa Kamala Harris niditra tamin'ny sehatra nasionaly tamin'ny naha-vehivavy voalohany azy, ary koa olona voalohany niloko loko, lasa filoha lefitry ny Etazonia, voajanahary ny manontany tena hoe iza izy tamin'ny fiainany taloha.
Niara-niasa tamin'ny media trance aho Kevin Ryerson hatramin'ny taona 2001. Hitako fa i Kevin dia nampita mpitari-dalana fanahy antsoina hoe Ahtun Re izay nampiseho ny fahaizana mametraka ny lalao taloha taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana avo lenta.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niarahana tamin'i Kevin dia nanontany an'i Ahtun Re aho hoe iza i Kamala mety ho efa taloha. Taorian'ny fotoana nisaintsainana dia nilaza tamiko i Ahtun fa i Kamala Harris dia zana-tsokajy amerikana fahasivy ambin'ny folo taona izay nanolo-tena hametraka ny zon'ny vehivavy hifidy. Nilaza tamiko izy fa ny anarany dia eo amoron'ny tsipika hoe "Carrie."
Rehefa avy nanao fikarohana kely tao amin'ny Internet aho dia nahita mpilatsaka hofidina. Carrie Chapman Catt Teraka tamin'ny 1859 ary maty tamin'ny 1947. Mpitondra misolo toerana izy izay niady ho an'ny 19th Fanitsiana, izay nanome ny vehivavy any Etazonia zo hanana fifidianana tamin'ny 1920.
Tranga iray mifandraika amin'izany dia: Fiainana taloha ho an'i Joseph Biden
Raha hijery ireo tranga hafa mitovy dia miangavy anao:
Trangam-panjakan'olombelona ao amin'ny vatana vaovao indray mandray anjara amin'ny mpanao politika
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ireo dia fitoviana amin'ny firafitry ny tarehy Carrie Chapman Catt sy Kamala Harris.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Ny fientanam-po amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina dia voaporofo amin'ny fiainan'i Carrie sy Kamala.
Fanovana ny hazakazaka amin'ny tranga fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao: Carrie Chapman Catt dia Kaokazy, raha Kamala Harris kosa dia nateraky ny reny avy any India ary raim-pianakaviana razambe afrikanina.
Ny fandinihana azon'ny olona atao ovaova ny firazanana sy ny foko amin'ny androm-piainana iray hafa afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny ady sy fifandirana dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireto marika famantarana ny maha-izy azy ireto.